ट्रेडमिलमा दौड्दै हुनुहुन्छ ? यी ५ कुरा ध्यान दिनुस ! - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
ट्रेडमिलमा दौड्दै हुनुहुन्छ ? यी ५ कुरा ध्यान दिनुस !
शहरी जीवनको ब्यस्तताले गर्दा धेरैलाई जिमसम्म गएर एक्सरसाईज गर्ने फूर्सद पनि नहुने भएको छ । यस्तो अवस्थामा धेरैले घरमै ट्रेडमिल राखेर एक्सरसाईज गर्ने सोचाई बनाउन थालेका छन् ।
घरमै ट्रेडमिल राखेर एक्सरसाईज गर्छु भन्ने कुरा जति सजिलो सुनिन्छ एक्लै गर्दा केही सावधानीहरु अपनाउनु नै पर्ने हुन्छ । जिममा प्रशिक्षक हुने हुनाले उनले धेरै कुरा सिकाईरहेका हुन्छन् तर घरमै एक्लै गर्दा कोही पनि प्रशिक्षक नभएको कारण स्वयं नै सावधान भएर गर्दा राम्रो हुन्छ ।
ट्रेडमिल एउटा यस्तो उपकरण हो जसमा हिड्दा स्वास्थसंग सम्बन्धित फाईदाहरु हुन्छ नै । यदी पहिलो पटक ट्रेडमिलमा हिडेर एक्सरसाईज गर्दै हुनुहुन्छ भने चोट लाग्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यदी तपाईलाई लामो समय देखि ट्रेडमिलमा दौडेर एक्सरसाईज गर्ने चाहना छ भने यसमा कसरी दौडदा तपाईलाई फाइदा गर्छ भन्ने केही उपयोगी जानकारीहरु ।
जुनसुकै एक्सरसाईज गर्नु अघि पनि वार्मअप गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । अझ ट्रेडमिलमा दौडनु अघि पनि वार्मअप गर्नु जरुरी नै हुन्छ । कतिपय मानिसहरु बिहान उठ्ने बित्तिकै ट्रेडमिलमा दौडन थालिहाल्छन् । यो कार्य तपाईको शरीरकालागि बेफाइदाजनक हुन सक्छ ।
वार्मअप विना ट्रेडमिलमा दौडदा चोट लाग्ने सम्भावना बढ्न सक्छ । वार्मअव विना ट्रेडमिलमा दौडदा हाम्रो शरीरको मांसपेशीहरु कसिलो भैरहेको हुन्छ भने शरीरमा प्रर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पनि पुगेको हुदैंन । वार्मअपले शरीरको मांसपेशीहरुलाई खुकुलो बनाउनुका साथै मांसपेशीलाई पनि चाहिने अक्सिजनको मात्रा सप्लाई गर्छ ।
बिस्तारै–बिस्तारै दौडिन सुरु गर्ने
ट्रेडमिलमा दौडदा बिस्तारै दौडन सुरु गर्नु पर्छ । ट्रेडमिललाई १ देखि २ प्रतिशत माथि तिर सेट गरेर दौडन सुरु गर्नु पर्छ । यदि तपाई हिड्नको लागी मात्र ट्रेडमिलको प्रयोग गर्दै हुनुन्छ भने यसलाई शुन्यमा राख्नु राम्रो हुन्छ ।
फङ्सनहरुको बारेमा जानकारी राख्ने
पहिलो पटक ट्रेडमिलमा दौडदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यसको फङ्सनहरुका बारेमा राम्ररी जानकारी हुनुपर्छ । यसको फङ्सनहरुमा स्पिडलाई कसरी बढाउने–घटाउने र कसरी बन्द गर्ने भन्ने जान्नु पर्छ । यो बिषयमा तपाईले ट्रेडमिल किनेको पसलेलाई वा चिनेको ट्रेनरलाई सोध्नसक्नु हुन्छ ।
तपाईलाई ट्रेडमिलको स्पिड डिस्प्ले, हार्ट रेट मनिटर, पहिले नै फिक्स गरिएको वर्कआउट, क्यालोरी बर्न क्याल्कुलेटर, टाइम डिस्प्ले र इंकलाइन बटन को बारेमा थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ ।
आरामदायी जुत्ताको प्रयोग गर्ने
अरु वेला दौडदा हामी आरामदायी जुत्ता लगाउँछौ, त्यसैगरी ट्रेडमिलमा दौडनको लागी पनि आरामदायी जुत्ताको प्रयोग गर्नुपर्छ । आफ्नो साइजको र लगाउन सजिलो हुने किसिमको जुत्ता लगाउनु पर्छ । यसले तपाईको ध्यान भड्किदैन र तपाई दौडमा मात्र केन्द्रितहुन सक्नुहुन्छ ।
ब्यालेन्समा ध्यान दिने
पहिलो पटक ट्रेडमिलमा दौडदै हुनुहुन्छ भने तपाईले ट्रेडमिलको ह्यान्डिलमा समात्नु हुन्छ । तर यसो गर्दा तपाईलाई चोट लाग्ने सम्भावना बढि हुन्छ, यसको साथै तपाईको ब्यालेन्स र पोजिसन पनि बिग्र्रन सक्छ । त्यसैले ट्रेडकिलमा दौडदा ब्यालेन्स मिलाउनु पर्छ ।